करोडपति बन्ने चार फरमुला: २५ को उमेरबाटै प्लानिङ गरे दुई करोड यसरी जोगिन्छ चोखै :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: May 18, 2019 10:53 AM
काठमाडौं । धनी बन्ने चाहना कसको हुँदैन र? तर केही व्यक्ति मात्र छोटो उमेरमा करोडपति बन्ने गरेका छन्। करोडपति ती व्यक्ति बन्ने गरेका छन्, जो एकदमै राम्रोसँग आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन्। करोडपति बन्नका लागि ती ब्यक्तिहरुले अपनाउने सुत्रका बारेमा तपाईले पनि जान्दा राम्रो हुन्छ।
२५ बर्षको उमेर भएकालाई
तपाईको अहिलेको उमेर २५ बर्ष छ भने तपाईलाई करोडपति बन्न अझ सहज छ । तपाईले अवकास पाउँदासम्म दुई करोड रुपैयाँ आरामले जोगाउन सक्नु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले तपाईले प्रत्येक महिना पाँच हजार रुपैयाँ लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । तपाईको लगानीमा १० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल आयो भने पनि तपाई सजिलै करोडपति बन्न सक्नु हुन्छ ।
यसका लागि तपाईले सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआइपी) बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा तपाईको लगानीमा जोखिम पनि कम हुन्छ र एकदमै राम्रो प्रतिफल पनि पाउँदै जानु हुन्छ । एसआइपीको माध्यमबाट तपाईले सामूहिक लगानी कोषहरुमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।
उमेर मासिक लगानी औषत प्रतिफल अवकास उमेर लगानी रकम लगानीबाट हुने आम्दानी कुल प्राप्त हुने रकम
२५ बर्ष ५००० रुपैयाँ १०% ६० बर्ष २१ लाख १.७० करोड १.९१ करोड
उमेर ३० बर्षको भए यसरी प्लानिङ गर्नुस्
३० बर्ष ८००० रुपैयाँ १०% ६० बर्ष २८.८० लाख १.५३ करोड १.८२ करोड
उमेर ३५ बर्षको भए यसरी प्लानिङ गर्नुस्
३५ बर्ष १४००० रुपैयाँ १०% ६० बर्ष ४२ लाख १.४५ करोड १.८७ करोड
उमेर ४० बर्षको भए यसरी प्लानिङ गर्नुस्
४० बर्ष २६००० रुपैयाँ १०% ६० बर्ष ६२.४० लाख १.३६करोड १.९९ करोड
यसै गरी तपाईले ४५ देखि ५० बर्ष उमेरको पनि प्लानिङ गर्न सक्नु हुन्छ । तर यसले मासिक बोझ भने थपेर लैजान्छ । त्यसैले उमेर छँदै प्लानिङ गर्दा राम्रो हुन्छ । तपाई दुई करोड नै किन ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको पनि प्लानिङ गर्न सक्नु हुन्छ ।
एसआइपीले अनुशासित हिसावले लगानी गर्न प्रेरित गर्छ । प्रत्येक महिना रकम बचत गर्ने बानीले तपाईको बजेटलाई पनि असर गर्दैन । समयसँग तपाईले बचत गरेको रकम ठूलो थैलीमा परिणत भइसक्छ ।
एसआइपीको माध्यमबाट जम्मा भएको रकम तपाईले सेयर बजार घटेका बेला लगानी गर्ने अवसर पाउनु हुन्छ । बढेको बजारमा त जसले पनि लगानी गरिरहेको हुन्छ । वढेको बजारमा लगानी गर्दा जोखिम पनि ठूलो उठाउनु पर्छ । तर बजार घटेका बेला तपाईसँग जम्मा भएको रकम लगानी गर्नु भयो भने राम्रो आम्दानी गर्ने अवशर प्राप्त गर्नु हुने छ । यसबाट तपाईलाई करोडपति बन्न थप सजिलो हुन्छ ।
करोडपति बन्ने चार फरमुला: २५ को उमेरबाटै प्लानिङ गरे दुई करोड यसरी जोगिन्छ चोखै को लागी ५ प्रतिक्रिया(हरु)
Rohit khanal[ 2019-05-21 08:58:30 ]
Dherai jana le k ma lagaani garne bhanne cmnt dekhera ke bhanna man lagyo....
Monthly 5/6 k hamle share ma haaleu bhane... Hamle yo bhanda dherai.. Nasocheko return pauna sakinxa...
Kura eti matra ho hamle share ma lagani garda.. Ek choti majale talim liera garna sakinxa.... Share bata faida nepal ma kebal 2% manxe le matra uthauna safal bhaeka xan.... Hamile halka bukhera invest garema... Paisa dubne kurai aaudaina
JIYANA BAJRACHARYA[ 2019-05-19 06:04:41 ]
Ma ahile 28 barsa vaisaka, maila mahina ko 5000 jamma garna sakxu tara kasaree k maa lagani garni kehi idea xaina esko lagi kehi salla sujhab dinahuna binamra anurodh gardaxu ra please reply gardinuhola
Anil shrestha[ 2019-05-19 11:18:56 ]
Cheap N best Share Ma lagani garnu ............
roshan shrestha[ 2019-05-19 12:13:32 ]
Ma ahile 20 barsa ko ho moh mahina ko 5000 jamma garna sakxu tara kassaree k maa lagani garni kehi idea xaina esko lagi kehi salla sujhab dinahuna binamra anurodh gardaxu.
Ashok bk[ 2019-05-18 12:48:22 ]
Mero umer aile 30 can mahina ko 6000 lagani garna dakchhu Tara k ma ta kasari lagani garam khi sujhav Dina daknu hunxa